Mara mma photoreal mma si n'àgwàetiti Kefalonia and ya ọdụ Greece. Iji ruo ebe ahụ dị nnọọ tinye Kefallinia n'ọdụ ụgbọ elu nke FSX/P3D.
N'àgwàetiti Cephalonia ma ọ bụ Kefalonia ma ọ bụ Cephallonia ma ọ bụ Kefallonia makwaara dị ka Kefallinia ma ọ bụ Chephalonia Greek: Κεφαλονιά, Κεφαλλονιά; Italian: Cefalonia), bụ kasị nke Ionian Islands dị n'ebe ọdịda anyanwụ Greece. Ọ bụkwa a iche iche mpaghara unit nke Ionian Islands ugwu, ndị naanị obodo nke na mpaghara unit. The isi obodo nke Cephalonia bụ Argostoli. (Wikipedia)
Onye edemede: Dimitris Ntaskas